I-Brass ingxubevange yobhedu kunye ne-zinc ngokusebenza okukhulu, ukubola kunye nokunxiba ukuxhathisa kodwa ukungahambi kakuhle kombane. I-zinc kubhedu ibonelela ngokunganyangekiyo kwe-abrasion kwaye ivumela amandla aphezulu okuqina. Ngaphandle koko, ikwabonelela ngokuqina okuphezulu xa kuthelekiswa nobhedu. I-Brass yeyona alloy isezantsi yobhedu esekwe kwisinyithi kwaye ikwangumbandela oqhelekileyo wocingo olukiweyo. Iindidi zethu eziqhelekileyo zobhedu ezisetyenziselwa ucingo oluphothiweyo zibandakanya ubhedu 65/35, 80/20 kunye no-94/6.
Ubhedu wocingo olubiyele
ICopper sisinyithi esithambileyo, esinokuthambeka kunye nesine-ductile eneshushu kakhulu sokuqhuba kombane kunye nokuqhuba kombane. Xa ubonakaliswe emoyeni ixesha elide, ukusabela okucothayo kwe-oxidation kwenzeka ukwenza umaleko we-oxide yobhedu kunye nokuqhubela phambili ukonyusa ukumelana nobhedu. Ngenxa yexabiso layo eliphezulu, ubhedu ayisiyonto iqhelekileyo yocingo olukiweyo.
Phosphor Bronze wocingo
I-Phosphor bronze yenziwe nge-bronze enomxholo we-phosphorus we-0.03 ～ 0.35%, umxholo weTin 5 ～ 8% Ezinye izinto ezilandelwayo njenge-iron, i-Fe, i-zinc, i-Zn, njl.njl. Ingasetyenziswa kwizixhobo zombane kunye nezomatshini, kwaye ukuthembeka kuphezulu kuneemveliso eziqhelekileyo zobhedu. Ubhedu olukiweyo wocingo luphezulu kunobhedu wocingo ekumelaneni nokubola komhlaba, esona sizathu siphambili sokuba ukusetyenziswa kobhedu kusetyenziswe kwiindawo ezahlukeneyo zaselwandle kunye nezomkhosi kwiscreen sezinambuzane zorhwebo nezokuhlala. Umsebenzisi oshishino lwelaphu locingo, umnatha wocingo lobhedu unzima kwaye awuthambeki ngokuthelekiswa nocingo olulukiweyo lobhedu, kwaye ngenxa yoko, luqhele ukusetyenziswa kukwahlulahlula kunye nokuhluza izicelo.
Yenziwe ngentsimbi eshayinayo eluka wocingo
I-stainless steel dutch weave wire mesh, ekwabizwa ngokuba lilaphu lokucoca isinyithi seshishini, ngokubanzi yenziwa ngeentambo ezibekwe kufutshane ukuze zibonelele ngamandla oomatshini bokucoca ulwelo. Sinikezela uluhlu olupheleleyo lwelaphu lokucoca isinyithi kumatshini otyhidiweyo waseDutch, i-twill dutch kunye ne-back dutch weave. Ngomgangatho wokucoca ulwelo ukusuka kwi-5 μm ukuya ku-400 μm, iimpahla zethu zokucoca ulwelo ziveliswa ngokudityaniswa okubanzi kwezinto, iidayimitha zocingo kunye nobukhulu bokuvula ukuze zikwazi ukumelana neemfuno ezahlukeneyo zokuhluza. Isetyenziswa ngokubanzi kwizicelo ezahlukeneyo zokucoca, ezinjengezixhobo zokucoca ulwelo, ukunyibilika kunye neefilitha zepolymer kunye nezihluzo ze-extruder.
Stainless Fine wocingo wocingo
Mesh: Ukusuka kwi-90 mesh ukuya kwi-635 mesh
Uhlobo olukiweyo: Plain Weave / Twill Weave
1. Isetyenziselwa ukuhluza kunye nokuhluza phantsi kwe-asidi kunye neemeko ze-alkali zokusingqongileyo, njenge-shale shaker screen mesh kwishishini le-petroleum, njengesixhobo sokucoca ulwelo kwimizi-mveliso yamachiza kunye neekhemikhali nefayibha, nanjengomnatha wokukhetha kwishishini lokhetho.
2. Isetyenziswa ngokubanzi kumzi mveliso nakwicandelo lokwakha ukucoca isanti, ulwelo kunye negesi, kwaye inokusetyenziselwa ukhuselo lokhuseleko lwezixhobo zoomatshini.
3. esetyenziswa ngokubanzi ekuhluzeni nasekucoceni kunye nakwindawo yokhuseleko kuyo yonke imihombiso, ezemigodi, ipetroleum kunye nemizi-mveliso yamachiza, ukutya, amayeza, ukuvelisa oomatshini, umhombiso wokwakha, i-elektroniki, i-aerospace kunye namanye amashishini
Stainless erhabaxa wocingo
Enemingxuma: Ukususela 1 umnatha ukuya 80mesh
Icebo lokucoca ulwelo wocingo / iipakethe
Icebo lokucoca ulwelo mIidis disc (ngamanye amaxesha ekubhekiswa kuzo njengezikrini zokupakisha okanye iidiski zokucoca ulwelo) zenziwe ngeeshiti zentsimbi ezilukiweyo. Iidiski zomgangatho wocingo zivela kwizinto ezahlukeneyo zesinyithi kwaye ziyafumaneka ngobukhulu obahlukeneyo, izitayile, kunye nobukhulu phantse kuso nasiphi na isicelo. Iimveliso zethu zomelele, zihlala ixesha elide, ziyasebenza kwaye zinobuchule obuninzi.
Isihluzi seCylindrical Screen
Icebo lokucoca ulwelo le-cylindrical lenziwe ngesikrini esinye okanye esine-multilayer cylindrical ezikwi-welding edge okanye kumda we-aluminium alloy. Yomelele kwaye yomelele eyenza ukuba isikrini sisebenze ngakumbi ekukhutshweni kwepolymer njengepolyester, i-polyamide, ipolymer, iplastikhi evuthelweyo, iVarnishes, iipeyinti.
Izikrini zeefilitha zeCylindrical nazo zinokusetyenziswa njengezihluzi ukwahlula isanti okanye ezinye iisuntswana ezintle ezisuka emanzini kwimizi-mveliso okanye kunkcenkceshelo.
I-monel yocingo ephothiweyo
I-Monel ephothiweyo yocingo yinto ene-nickel esekwe kwizinto ezinokumelana nokubola kumanzi olwandle, izinyibilikisi zeekhemikhali, i-ammonia sulfur chloride, i-hydrogen chloride, kunye nemithombo yeendaba eneasidi.
I-Monel 400 ephothiweyo yocingo luhlobo lwe-alloy enganyangekiyo yokubola kunye nomthamo omkhulu, usetyenziso olubanzi kunye nokusebenza kakuhle. Inokumelana okuhle nokubola kwi-hydrofluoric acid kunye neendaba zemithombo yegesi, kwaye ikwanokumelana okuhle nomhlwa kwilye eshushu egxile. Kwangelo xesha, iyamelana nokubola kwezisombululo ezingathathi hlangothi, amanzi, amanzi olwandle, umoya, iikhompawundi eziphilayo, njl.Into ebalulekileyo kumxube we-alloy kukuba awuvelisi iintanda zoxinzelelo kunye nokusebenza kakuhle.
Isikrini seFestile engenasici:
1.Stainless izinambuzane screen steel ephothiweyo ukusuka stainless steel wire, nto leyo kuphela kuphucula ukubonakala kunye ocikizekileyo wire ubukhulu bayo, kodwa yenza imveliso ibe namandla kakhulu ngaphezu screen izinambuzane standard. Iscreen sefestile yesinyithi ngaphandle kwescreen sokuphucula ukubonwa kwesinambuzane esenzelwe ukwandisa umbono wangaphandle, usenza sibukhali kwaye sikhazimle ngakumbi. Ivumela ukuhamba komoya okuphezulu kwaye ihlangabezana nomgangatho ophezulu wokukhusela izinambuzane. Kufanelekile ukuba kungamampunge kwizicelo eziqhelekileyo zokuhlola ezifana neefestile, iingcango kunye neeveranda kwaye kukhuselekile ukusetyenziswa ngamaplanga aphathwe ngoxinzelelo.
Material: wire steel stainless. 304, 316, 316L.
Ubungakanani: 14 × 14 mesh, 16 × 16 mesh, 18 x14 mesh, 18 x18 mesh, 20 x20 mesh.
Awuyi kuba nomhlwa okanye idle, nakwimozulu eselunxwemeni okanye xa uphantsi kwemvula ezinkulu okanye iimeko ezimanzi.
Inikezela ngokubonakala kwangaphandle okukhulu ngenxa yolwakhiwo lwentambo yesinyithi egcina uninzi lwezinambuzane ngaphandle ngelixa likunika umbono ogqibeleleyo womhlaba ongaphandle.
Ngokukhuselekileyo isetyenziswe ngamaplanga aphethwe ngoxinzelelo.
Yomelele kwaye ihlala ixesha elide.
inikeza ukuhamba komoya okugqwesileyo, ukuvumela umoya opholileyo ukuba udlule ungene ekhayeni lakho.
Icebo lokucoca ulwelo Epoxy Camera
I-epoxy camera yocingo lokucoca ulwelo ubukhulu becala yenziwe ziingcingo zentsimbi ecacileyo ephothiweyo kunye kwaye yambethe umgangatho we-epoxy resin powder ngenkqubo yokutshiza i-electrostatic yokwenza le nto inganyangeki ukubola kunye neeasidi. I-epoxy camera camera mesh ihlala isetyenziswa njengaleyo yenkxaso yokuhluza endaweni ye-mesh yocingo kwaye ilungile ngenxa yozinzo lolwakhiwo kunye nokufikeleleka kwayo, lelona candelo lokucoca ulwelo. Ngokwesiqhelo umbala we-epoxy wokumnyama umnyama, kodwa sinokubonelela ngemibala ngokweemfuno zakho, ezinje ngwevu, mhlophe, luhlaza okwesibhakabhaka, njl. I-epoxy camera i-mesh yocingo efumanekayo kwimiqolo okanye isikwe ngemivumbo. Sisoloko sizibophelela ekuboneleleni nge-epoxy camera camera mesh ngoqoqosho, eco-friendly kwaye yomelele kuwe.
Isixhobo: 304, 304L, 316, 316L
Ububanzi ububanzi: 36 ``, 40 '', 48 ``, 60 ''.
Ipropathi: I-Acidproof, ukumelana nealkali, ukungabinentloko kunye nokuhlala ixesha elide
Sebenzisa: Ukusefa nokuhluza kwiimeko zeasidi kunye nealkali. I-Slurry net kwi-petroleum, ukuhluza kunye nokuhlola umnatha kwimveliso yeekhemikhali kunye neekhemikhali, i-asidi yokuhlamba i-mesh
Yamkela izinto zensimbi ezingenasici ezingama-316, 316L, 304, 302 njl. Ukuvelisa i-welding enxibe umnatha wokubalula okhethekileyo ngaphaya kobungakanani obuqhelekileyo: ububanzi bunokufikelela kwi-2.1m, kunye nobubanzi be-wire diameter, 5.0 mm. Iimveliso zikulungele ukubanjiswa komgangatho ophezulu wocingo, iishelfu zevenkile enkulu, umhombiso wangaphakathi nangaphandle, iibhasikiti zokutya, ukulima kwezilwanyana ezikumgangatho ophezulu. Inokubaluleka kokuqina okuphezulu, akukho rusi, anti-corrosion, acid / alkali-resisting kunye ne-head-resistant, njl.
Cumnatha wocingo odityanisiweyo wenziwe ngobubanzi becingo oluqala kwi-1.5mm ukuya kwi-6 mm. Kwinkqubo yangaphambi kokukrwitshwa, ucingo lwenziwa kuqala (lukrwitshiwe) koomatshini bokuchaneka besebenzisa iirotary die ezichaza ngokuchanekileyo izithuba zeengcingo. Oku kuqinisekisa ukuba iingcingo zitshixiwe ziqinile kwiziphambuka. Iingcingo zangaphambi kokukrwitshwa emva koko zihlanganisiwe koomatshini bendibano yesikrini eyilelweyo (ukujikeleza). Uhlobo lwe-crimping luchaza uhlobo lwe-weave. I-ISO 4783/3 ichaza iintlobo eziqhelekileyo zokuluka.